Adiresy: 110 Sejong-daero, Taepyeongno 1 (il) -ga, Jung-gu, Seoul, Korea Atsimo
Phone: +82 2120
Tsy very maina fa Seoul no heverina ho tanàna mahaliana indrindra ao Korea Atsimo . Maro ireo toerana tsy dia mahazatra ary tena tany am-piandohana izay mahatonga ny tarehin'ny tanàna ho mahafinaritra sy maoderina. Ny iray amin'ireo trano ireo dia ny Lapan'ny Tanànan'i Seoul. Momba izany ary miresaha.
Tany aloha, ny tanàna ambanivohitra dia hita ao amin'ny tranobe mahazatra indrindra manoloana ny ankehitriny. Tamin'ny taona 2008, nanapa-kevitra ireo manampahefan'ny tanàna fa fotoana hanovana ny fomba fiasa miasa, ary nanambara fifaninanana ho an'ny tetik'asa ara-tsakafo tsara indrindra. Nahazo ny iray izay tena be mpahalala indrindra ary tamin'izany fotoana izany ihany koa. Nanolo-kevitra ny hanatsara ny fepetra fiasan'ny manampahefana izy ary hanamora ny fiaraha-miasa amin'ny mponina. Araka ny famolavolana ny birao ara-birao iArc ary nanangana tranobe misy rihana 13, izay toa endriky ny fitaratra misy endrika tsy misy mari-pamantarana, ary ao anatin'izany dia misy "hevi-dehibe" maro.
Ny fanorenana dia naharitra 4 taona, ary ny volana Septambra 2012 dia nanamarika ny fanokanana ny biraon'ny ben'ny tanànan'i Seoul. Araka ny hevitra, ny tranobe dia mampifandray 3 singa: "fomban-drazana", "hoavy" ary olom-pirenena. "
Ny tranobe tranainy tao amin'ny Lapan'ny Tanàna, izay naorina nandritra ny vanim-potoanan'ny Japoney, dia tsy nandrava. Fa eo kosa ny tranombokim-panjakana iray eto.
Inona no tsy nampoizina ny efitranon'ny tanànan'i Seoul?
Tahaka ny hoe trano maitso mampitony ny ben'ny tanàna, izay any amin'ny tanàna rehetra, tsara, inona no mahagaga? Na dia izany aza, ao Seoul, tsy azo antoka loatra ny zava-drehetra. Eritrereto ny endriky ny faritra malaza ara - tsimia lavitra indrindra amin'ny tanàna alohan'ny ahitanao azy amin'ny masonao manokana:
Ecological compatibility. Ireo teknolojia maoderina ampiasaina amin'ny fananganana, dia nahatonga ny Zana-tanànan'i Seoul tena tsy manam-paharoa. Vita amin'ny fitaovana azo antoka izy io. Tsy misy rafitra mpanadio sy fizahantany - fa ny rafitra fanorenana voajanahary dia natsangana ao amin'ny trano, manome hafanana mangatsiatsiaka na amin'ny andro mafana. Ny fanorenana angovo ihany koa dia omena maimaim-poana - noho ny solosaina napetraka eny ambony tafo. Ny fahazavana dia tena voajanahary, amin'ny alalan'ny rindrin-trano. Ary ny zavatra voalohany atrehinao eo am-baravarana dia ny ahi-maitso. Eo amin'ny hazo sy ny kirihitra dia mitombo, ary na ny rindrina aza dia rakotra tanimboly maitso, izay tsy mampino fotsiny. Ny zavamaniry rehetra dia nambolena tao anaty ranon-tsavony izay mitsambikina eo amin'ny rindrina anatiny.
Fanatanjahan-tena. Na dia eo aza ny maha-toeram-panjakàna goavana toy izany, dia misokatra hatrany amin'ireo vahiny vahiny izany. Afaka miditra ao anatiny daholo ny olona rehetra, manara-maso ny efitrano ary na dia ny toerana ara-pitantanana aza. Mampiseho izany fa ny demaokrasia sy mangarahara amin'ny asa ataon'ny manampahefana koreanina dia tsy an-teny fotsiny ihany fa amin'ny asa ihany koa. Ankoatra izany, afaka mitsidika ny trano ianao raha afaka maimaim-poana.
Fampiononana ho an'ny mpitsidika. Eritrereto ny fandraisana avy amin'ny manampahefana Koreana amin'ny fampiononana farafahakeliny. Ho an'ity fikasana ity, ao amin'ny efitrano tsirairay ao amin'ny City Hall, misy sofas, solosaina misy fidirana amin'ny aterineto, ary eny fa na aiza na aiza ho an'ny fampiasana telefaona (azonao atao ihany koa ny mampiasa azy ireny). Ao amin'ny efitrano fiandrasana dia misy fitaovana elektronika, izay manondro ny fotoana fandraisana, ny anaran'ny manampahefana ary ny toerana misy ny birao. Mahagaga fa ao amin'ny biraon'ny ben'ny tanàna, na dia eo amin'ny mandamandina eo amin'ny rindrina aza, dia vita pirinty amin'ny fanazavana amin'ny jamba i Braille.
Fahafahana mankany fialam-boly . Ho an'ny mpitsidika na ny manampahefana mandritra ny fialan-tsasatra mandritra ny sakafo antoandro dia afaka mitsahatra amin'ny raharaham-barotra, manana cafes maromaro ny City Hall Ary manodidina ny trano dia toeram-pokonolona maitso tsara tarehy sy zaridaina kely.
Ny foiben-toeran'ny Seoul dia miorina ao afovoan-tanàna. Tena mora ny mivezivezy any metro . Ny station ou dia ny City Hall Station.
Mampitombo na mampidina ny tsindry karkade?
Takelatra eo amin'ny efitrano
Fahaizan'ny fanandramana amin'ny vondrona tanora
Lavash roll miaraka amin'ny salmon
Jackets The Face North
Dresses ho an'ny vehivavy 35 taona
Fonosana mankany amin'ny lavarangana
Ahoana no hambolena karaoty?
Ny fiainan'ny rononon-jaza
Fotoam-panatrehana ny taona vaovao ao amin'ny studio - ireo hevitra sy sary tsara indrindra ho an'ny sary an-tsary
Photosession with strawberries
Hira ho an'ny 1 Septambra
Nina Dobrev nanamafy ny raharaha momba an'i Glen Powell
Maskina amin'ny fanamaivanana ny volo
Green kafe amin'ny takelaka
Sakafo ho an'ny sauvatoa
Salady italiana miaraka amin'ny pasta
Kalsy ho an'ny vehivavy bevohoka - fanafody